Madaxii hore ee Premier League oo loo ururinayo 5 milyan oo Gini | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxii hore ee Premier League oo loo ururinayo 5 milyan oo Gini
Dhamaan labaatanka kooxood ee ka tirsan horyaalka Premier League ayaa laga dalbaday inay soo ururiyaan lacag gaadhaysa shan milyan oo Gini, taas oo kooxuhu ay tahay inay miiska soo saaraan maalinta Khamiista.
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa soo dhigtay qorshe lagu abaal-marinayo madaxa maamulka horyaalka Premier League ee Richard Scudamore oo bisha dambe shaqada ka degaya kaddib muddo 19 sannadood ah oo uu maamulayey tartanka.
20-ka kooxood ee horyaalka Premier League ayaa ay Chelsea ka dalbatay in mid walba ay keento £250,000 (laba boqol iyo konton kun) oo Gini, taas oo marka laysku geeyo noqonaysa 5 milyan oo Gini oo isla marka uu shirku dhamaado farta laga saaro Scudamore oo hadiyad iyo macasalaamayn looga dhigayo.
Scudamore oo sannadkii mushahar u qaadan jiray lacag dhan £2.5 milyan ayaa go’aan ku gaadhay inuu ka tago horyaalka oo uu horumar badan gaadhsiiyey, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, shuruucda iyo inuu ka dhigay midka dunida loogu daawashada badan yahay.
19 sannadood ka hor markii uu noqday madaxa Premier League, waxay dhamaan kooxuhu ka heli jireen telefishanada £670 milyan oo naadi walba qaybtiisa la siin jiray, waxaase uu gaadhsiiyey £5.14 bilyan oo uu maanta kaga tegayo iyadoo kooxuhu qaybsadaan.
Qorshahan lagu abaal-marinayo, waxa miiska soo dhigay guddoomiyaha Chelsea ee Bruce Buck oo ay saaxiibo dhow ahaayeen Scudamore tan iyo sannadkii 2003 oo ahayd wakhtigii Bruce loo dhiibay shaqada Chelsea.
Bruce ayaa waxa uu ku jiray murashaxiintii doonayey in loo dhiibo shaqada uu bannaynayo Scudamore, waxaana kula tartamayey agaasimaha fulinta Leicester City ee Susan Whelan iyo guddoomiyaha kooxda Burnley Mike Garlick, hase yeeshee waxa xilkaas loo doortay haweenay lagu magacaabo Sussana Diannage oo madax ka ahaan jirtay qaybta xawaanka ee telefishanka Discovery.
Scudamore ayaa xilkii ugu horreeyey ee Premier League waxa uu qabtay November 1999, markaas oo uu noqday agaasimaha fulinta ka hor intii aanu June 2014 noqonin guddoomiyaha guud ee Premier League.